Shengxin အားကစား Youfa Group နဲ့လကျကိုရရှိထားသူ, နှင့်၎င်း၏အားသာချက်များကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှာကြာလော့။ - တရုတ် Tianjin Shengxin အားကစားကုန်စည်
Shengxin အားကစား Youfa Group နဲ့လကျကိုရရှိထားသူ, နှင့်၎င်း၏အားသာချက်များကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရှာကြာလော့။
လူတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းများနှင့်အမျိုးသားရေးကြံ့ခိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု၏သန်စွမ်းမြင့်တက်၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်းဧကန်အမှန်တစ်နေထွက်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, နှင့်ဈေးကွက်အာကာသ ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ Youfa Group ၏အဓိကထုတ်ကုန်, welded သံမဏိပိုက်, အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အဓိကကုန်ကြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Shengxin အားကစားနှင့် Youfa Group မှအောင်မြင်စွာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်မှု, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိခြင်းနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိ၏နိယာမအပေါ်အခြေခံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောင်မြင်ပါပြီသောဤနောက်ခံဆန့်ကျင်သည်: Youfa Group မှ Shengxin အားကစားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောစီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှုထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ စစ်ဆင်ရေးတိုးချဲ့များအတွက်ကွင်းများကို, Shengxin အားကစားအတွက်လိုအပ်သောအပေါငျးတို့သသံမဏိပိုက် Youfa Group ၏လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီထံမှဝယ်ယူနေကြသည်။
ဤစီမံကိန်းများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုက၎င်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုခိုင်ခံ့စေနှင့်၎င်း၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအလားအလာမြှင့်တင်ရန်နှင့်လျှင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရန် Shengxin အားကစားအဘို့ကိုသာအခွင့်အလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအစမြစ်အောက်ပိုင်းတိုးချဲ့နှင့်အားကစားပစ္စည်းကိရိယာများစက်မှုလုပ်ငန်းရိုက်ထည့်ဖို့ Youfa သံမဏိပိုက်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Chain အားဖြင့်တက်ကြွစွာနှင့်အကျိုးရှိသောကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
Post ကိုအချိန်: ဇူလိုင်-19-2018